ब्याइफ्रेण्डलाई पठाएको नांगो फोटो आफ्नै बुवाकँहा पुगेपछि… | Rajmarga
ब्याइफ्रेण्डलाई पठाएको नांगो फोटो आफ्नै बुवाकँहा पुगेपछि…
एजेन्सी। केही दिन पहिला ट्विटरमा कागियालासज नामका युजरले च्याटको स्क्रिनसट शेयर गरेका थिए, जसमा जेसिका नामकी युवतीले केटासाथीको ठाउँमा आफ्ना बुवालाई हट तस्बिर पठाएकी थिइन। फोटोमा युवतीको शरीर देखिएको थियो तर अनुहार देखिएको थिएन।
तर म्यासेज पढ्ने वित्तिकै बुवाले आफ्नी छोरीको फोटो चिनिहाले। यतिबेला सो स्क्रिनसट भाइरल भएको छ। ज्यासिकालाई फोटो पठाउने वित्तिकै आफूले गल्ती गरे भन्ने भएको थियो।
जेसिका प्रेमिलाई रेड लक्जरीमा फोटो पठाउँदै थिइन, तर गल्तीले उनले सो फोटो बुवालाई पठाइन्। जेसिकाका बुवाले फोटो हेर्ने वित्तिकै रिप्लाइ गरे र जेसिकाले तत्काल त्यो फोटो मेटाउन आग्रह गरिन्। ‘मैले मेरा प्रेमी ड्यानलाई पठाउन लागेको फोटो तपाइँलाई पठाएँछु, कृपया त्यो फोटो डिलिट गर्नुहोला,’ जेसिकाले भनिन्।
छाेरीको पुरै म्यासेज पढेपछि बुवाले रिप्लाइ गर्दै तिम्रो शरीर तिम्रो आमाको जस्तै रहेछ भन्दै प्रतिक्रिया दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। बुवाको रिप्लाइ आउने वित्तिकै जेसिकाले आफूलाई भद्दा म्यासेज नगर्न भन्दै अफलाइन भइन्।
Previous post: ​काठमाडौंमा फ्ल्याट भाडामा लिएर यौन धन्धा
Next post: भिटेनको ‘कथा’ ट्रेन्डिङ नम्बर एकमा !
कोरोनाबारे १२ वर्ष अघि गरेको भविष्यवाणी कसरी मिल्यो ?
भूत यो संसारमै छ कि मनमा मात्र, यस्तो रहेछ वास्तविकता
कपालदेखि मुटुसम्मको लागि उपयोगि फिटकिरी यसरी प्रयोग गर्नुस्
यो हो संसारकै सबैभन्दा सुन्दर र आरामदायक जेल
विज्ञ भन्छन्, ‘यस्ता केटीसँग टाढै रहनुहोस्’
१९ वर्षका बेहुला र ७२ वर्षीया बेहुली, यस्तो रह्यो पहिलो रात !